फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्यो, ग्याँस प्रति सिलिन्डर १५७५ रुपैयाँ - Limbuwan khabar
फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्यो, ग्याँस प्रति सिलिन्डर १५७५ रुपैयाँ
बुधबार, २४ कार्तिक, २०७८ रातीको १०:०२ बजे, लिम्बुवान न्युज
लिम्बुवानखबर संवाददाता । सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको पनि मूल्य बढेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको जनाएको छ । यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढाएर १५ सय ७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अब पेट्रोल प्रति लिटर १३६ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मटितेलको प्रतिलिटर मूल्य ११९ रुपैयाँ कायम भएको छ । आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मूल्य समायोजन पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रू. १७.५८, डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ घाटा रहेको जनाएको छ । ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रू. ६५७.८४ घाटा रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अवस्थामा १५ दिनमा निगमलाई २ अर्ब ६२ करोड घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण रहेको जनाएको छ ।